NextMapping | Akwụkwọ White
NextMapping™ Ọdịnihu nke Ọrụ White Akwụkwọ
Na NextMapping anyị na-eme nyocha na-aga n'ihu na ihe niile ọrụ ọdịnihu. Akwụkwọ ọcha anyị gụnyere nyocha nke AI, akpaaka na roboti yana nsogbu ndị ọrụ na-eche ihu ebe ọrụ taa.
NEW! Ihe Ndị Na - arụ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnihu nke 20
Ihe ngbako nke 20 nke oru Ego 2020
Na NextMapping™ nchoputa anyi gbadoro ukwu na nke anyi, usoro PREDICT bu nke edeputara na ndi kachasi ahia, “NextMapping - Anticipate, Navigate and Create the Future of Work.”
Ihe Nlere PREDICT mejuputara uzo 7 nke ihe nlere anya iji nye echiche ndi ndu, ndi otu na ulo ahia. Ihe Nlereanya PREDICT na-enye usoro iji nyere aka ịmepụta ọdịnihu Ọhụụ nke ọrụ nke kwekọrọ na atụmatụ na omume dị ugbu a.
Nkwupụta a nwere ike ime nyocha na otu esi enyere ndị isi, otu, ndị ọchụnta ego na azụmaahịa aka ịmepụta ọdịnihu!
Ntughari ndi mmadu na njigide n'Ọdịnihu nke Ọrụ
Otu nnukwu ihe na-elekwasị anya maka azụmaahịa na 2019 na gafere n'ime 2020 bụ ịchọta, na-ewe ma na-edebe ndị ezigbo mmadụ.
A na-agbagha ndị isi n’inweta ndị nwere ọgụgụ isi nke ukwuu na ndị dị njikere ịrụ ọrụ ndị mmadụ. A na-agbaghakwa ndị isi na otu esi eme ka ndị nwere nkà banye na njem.
Nke bụ eziokwu bụ na ndị isi ugbu a na-asọ mpi na ọtụtụ ihe maka ịbanye - asọmpi ahụ abụghị naanị ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ọ bụ ndị ọrụ n'onwe ha.
Strategieskpụrụ ndị rụrụ ọrụ maka afọ agaghị arụ ọrụ ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu. Omume na-agbanwe agbanwe na ọgbọ a nke ndị ọrụ anaghị achọ oke maka 'ọrụ' ma ọ bụ 'ọrụ' ebe ha na-achọ ọrụ bara uru, ohere nwa oge, ohere ọrụ ha, ọrụ ime na ihe ndị ọzọ.
N'ime akwụkwọ White White a zuru oke, anyị na-enye data, nyocha na ihe omimi banyere otu ọ ga - esi nọrọ n'isi ndị ọrụ nke ịnwetara ya na ijigide ya.
Ọ bụrụ na Rọbọt bụ Ọdịnihu nke Ọrụ - Gịnị Dịịrị Ndị Ọzọ?
Ọtụtụ ndị na-eme n'ọdịnihu na-elekwasị anya n'echiche dystopian banyere ọdịnihu ebe anyị ga na-arụ ọrụ ma na-ebikwa n'eziokwu robot rụrụ arụ.
Enwekwara nnyocha na-egosi na ANY as mmadụ nwere ike ikpebi OZI anyị si eji robots, akpaaka na AI na anyị dị ka iji ihe ọhụrụ na teknụzụ iji mepụta ndụ ka mma na ịrụ ọrụ maka mmadụ niile nọ na mbara ala.
Akwụkwọ ọcha a na-enye echiche abụọ dị na ya ma na-enye gị ohere ikpebi ọdịnihu ịchọrọ ịmepụta.